Autocracy - यो के हो? Unshakable Autocracy मा मेनिफेस्टो
को राजतन्त्र अनुमान को अस्पष्टता राज्य संगठन सबैभन्दा विवादास्पद र भावनात्मक चार्ज यस प्रकार बनाउँछ।
राजाहरूले को युग
Monarchic उपकरण मानव समाजमा को संक्रमण राज्य संगठित चिन्ह लगाइयो। यो प्राचीन भूमध्य लोकतन्त्र प्रदान गर्न निर्णय र वरपरको राज्यहरू को आकर्षक सुविधाहरू विरोध गर्छन्। तर, इतिहास पुरानो लोकतन्त्र चाँडै दोस्रो समाज को monarchical सिद्धान्त द्वारा उत्पन्न प्रतियोगिता मा, despotism र tyranny मा degenerated भनेर देखाउँछ।
पश्चिम र पूर्व
को संग रोमी साम्राज्यको पतन भएको पुरानो democracies समयमा समाप्त भयो। पश्चिमी र पूर्वी युरोप मा भविष्यमा राज्य पदानुक्रमित समुदाय प्रोटोटाइप गठन गर्न थाले। आफ्नो आधार सैन्य अभिजात वर्ग, जो बीच पूर्ण मूल्य को सैन्य नेता को पराधीन, र प्रश्न मा बोलाउन को तह थियो। पूर्वी परम्परा आफ्नो कुल बाँकी वरिपरि एकजुट गर्न सक्षम आदिवासी नेताहरूले, प्राथमिकता दिए। रोचक मतभेद भए तापनि सामाजिक संगठनको monarchical सिद्धान्त लगभग सबैतिर प्रबल। इतिहासकारहरूले यो अवधि औसत वा गाढा उमेर कल। तथापि, वस्तुतः प्रबुद्ध आधुनिक युग को नीति मा धेरै वजन छ, जो सबै आधुनिक अभिजात वर्ग, त्यहाँ ती पटक मध्ये एक छ, र तिनीहरूलाई को छाप फलाउँछ।
रूसी इतिहासकारहरूले प्रमाणित र रूसी राजतन्त्र पश्चिमी युरोपेली "स्तर" अनुपालनको जोड गर्न धेरै प्रयास गरेका छन्। जाहिर छ, तिनीहरूले यी Reigning घरमा सेवा प्रदान विश्वास गरे। यद्यपि, कुनै पनि महत्वपूर्ण मतभेद को भावना त्यहाँ, हामी राजतंत्रवादी उपकरणहरू अन्य राज्य संग रूस मा autocracy तुलना भने। रूस मा monarchical सिस्टम बलियो बनाउन वास्तविक साधन को विकास को लागि आवश्यकता अध्ययन प्रयास गर्न वृद्धि दिनुभएको छ। Autocracy - यो शब्द मा संलग्न छ? रूस को इतिहास अधिकारीहरु र जनसंख्या बीचको सम्बन्ध को एक जटिल र विरोधाभासी तस्वीर दिन्छ। Monarchic उपकरण देश मा लगाएको थिएन कुनै विकल्प छ। त्यसको विपरीत, त्यहाँ जो मा रूस बाटो बारी सक्छ सडक, थुप्रै काँटाहरू छन् संवैधानिक राजतन्त्र को प्रतिनिधि संस्थाहरु मार्फत वा बोर्ड को।
autocracy सामाजिक महत्त्व सफाइ पहिलो प्रयास गणना Uvarov द्वारा शुरू भएको थियो। को mutiny रूपमा चिनिने गार्ड, को अधिकारीहरु को एक समूह द्वारा आयोजित थियो को Decembrists विद्रोह, रूसी autocracy आधारित थियो जो सामाजिक समर्थन, को विस्तार माग। उहाँको समझ मा के छ? धेरै को लागि, यो विचार बोक्न गर्न खतरा शिक्षा प्रणाली मार्फत शुरू भइरहेको स्पष्ट थियो। तर Uvarov छैन केवल शैक्षिक प्रक्रिया एक राजनीतिक आयाम बनाउन कोसिस गर्यो। यसको सूत्र - "Orthodoxy, Autocracy, राष्ट्रियता" - चेलाहरूलाई छैन सम्बोधन गरिएको छ। यो मुख्य सबैभन्दा आचरण constituting व्यवस्थापन तह साम्राज्य गर्न सम्बोधन गरिएको छ। यसलाई स्पष्ट जडान autocracy र राष्ट्रियता बताए। त्यो एकतंत्र राज्य को राष्ट्रिय चरित्र को घोषणा मार्फत भव्य despotism को प्रलोभन विरुद्ध चेतावनी दिनुभयो।
एक पूर्व प्रमुख Narodovolets Tikhomirov कठिन राजनीतिक विकास मार्फत गएको छ। आफ्नो मनमा उदारवादी मान autocracy जित्यो। त्यहाँ पहिले याद थिएन जो Tikhomirov, हेर्न के हो? उहाँले पहिले बेवास्ता गरिएको थियो जो autocracy र statehood को जडान, ध्यान आकर्षित। उहाँले सार्वजनिक जीवन को Metronome छ सार्वभौमिकताको अवधारणा, विकास गरे। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, औदार्य घोषणा को एक उत्सव मा, राज्य ठाउँ कार्यकर्ता विनियोजन गरिएको छ। तर यस्तो कि एक राज्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बच्न सक्नुहुन्छ? यसलाई सार्वजनिक आवेग र चासो समूह सामना गर्न सक्षम छ कि छैन भनेर? Narodnaya Volya आतंक स्पष्ट खतरा को स्तर देखाउनुभयो। यो पनि Unshakable Autocracy, सिंहासनमा प्रविष्टि मा भएको विज्ञापन मा मेनिफेस्टो testified छ अलेक्जेन्डर III को।
मान्छे राजतन्त्र Solonevich
autocracy को विचार रूसी राजतन्त्र नै बाँचे। साझेदारी इतिहास को इवान Solonevich समझ गर्न गिर, को autocracy थिच्नुहोस्। बाट एन्कर्सका वर्ष सयौं लागि यो पकड अचानक हराएको देश, गलत के हो? तर कम्युनिस्ट कूटवेश मा विजयोल्लास औदार्य आदर्श touting देखि अविश्वसनीय टाढा छ। को autocracy को inviolability मा मेनिफेस्टो एक ऐतिहासिक उपाख्यान वा दूरदृष्टि रूपमा देखेको हुनुपर्छ? Solonevich monarchical विचार सोभियत मानिसको अनुभव पहिले नै पुनर्विचार। Orthodoxy, Autocracy - सबै आफ्नो आँखा मा धुलो गर्न लागे। तर हराएको वास्तविकता थप विचार देखिने गरे।
सोभियत autocracy विजेता को आदिम र inferiority व्यावहारिक र ideological सामान को antithesis देखाउन। Solonevich समाज को विकास को एक ल्यान्डमार्क चरण रूपमा autocracy को समझ शुरू। राष्ट्रलाई, त्यो सर्वोच्च शक्ति मा मानिसहरूको विश्वास यो स्थायी रूपमा यो राज्य संगठनको कार्य गर्न प्रत्यायोजित छ भनेर उच्च छ जसमा लोकतन्त्र को उच्चतम रूप रूपमा autocracy थाह थियो Prioritizes। तर सर्वोच्च अख्तियार मानिसहरूको सामु त जिम्मेवार, कि उहाँलाई सेवा भन्दा उच्च लक्ष्य छैन। को Solonevich पनि विचार को व्यावहारिक कार्यान्वयन आफ्नो जीवनकालमा हुन सकेन। उहाँले आफ्नो पुस्ता को भाग्य गर्न खसेको छ जो उथलपुथल, बाँचे गर्ने सन्तानहरू आफ्नो सन्देश लिएर यो गणना गरेका थिए।
सिविल युद्ध समयमा शासन Romanov राजवंश प्रत्यक्ष लाइन को दमन आफ्नो नातेदार द्वारा रूसी सिंहासन गर्न unconvincing दावी गरे। राजा को एक सम्भव दृश्य छविको Deprived, autocracy समर्थकहरूको को बहाली squabbles र शर्मिंदगी प्रदर्शनमा समय बिताउँछन्। Paradoxically, यो आधुनिक autocracy विचार को आकर्षण असर गरेन।
सोभियत संघ पतन र रूसी साम्राज्य monarchical भावनाहरू को क्षेत्रमा कम्युनिस्ट हैकम समापन पछि एकदम उच्चारण थिए। तिनीहरूले एक राजनीतिक आन्दोलन वा पहिचान सामाजिक संरचना को प्रकार छैनन्। आन्तरिक कारण कारण जनसंख्याको प्रसार। तिनीहरूले statists वा रूसी nationalists महसुस कि जनसंख्या को भाग अधीनमा छन्। आफ्नो बुझाइ मा Autocracy मुख्यतया निर्माण वा राज्य पुनस्थापित उपकरण हो।
ठूलो कठिनाई संग, पैतृक predecessors बायाँ विनाशकारी प्रवृत्ति आधुनिक रूसी शक्ति द्वारा हटाउन छन्। रूसी राष्ट्रवादी autocracy लागि रूसी राष्ट्रिय राज्य को अवधारणा एक फिर्ती हो। हालसम्म, आधुनिक उदार समाज सूत्र तिनीहरूलाई आकर्षण तुलना विचार प्रस्ताव गर्न सक्षम छ "Orthodoxy, Autocracy, राष्ट्रियता।"
स्पार्टा एक सैन्य शिविरमा जस्तै बारेमा छोटकरीमा
पदक "बुडापेस्ट को कब्जा लागि": विवरण र इतिहास
ओल्डेनबर्ग को राजकुमार। ओल्डेनबर्ग को इतिहास हाउस
Conquistador - एक विजेता, को औबेरियन प्रायद्वीप को एक मूल
को प्रहरी - यो क्रम इमानदार संरक्षकको छ
अप्रत्यक्ष तुलसी, यूरी Zhukov, दिमित्री Shemyaka: को अगुवाहरू तुलसी द्वितीय संग संघर्ष
Gena र Cheburashka - हाम्रो बाल्यकाल को नायक
जो बैंक बंधक प्राप्त गर्न राम्रो छ?
मूल र phraseologism मूल्य "नीलो बाहिर"
वर्णन, प्रविधि, निर्देशन र प्रतिक्रिया: आफ्नै हातले जग reinforcing सही कसरी बनाउने
फोटो र समीक्षा: मा रोम सेन्ट पत्रुसको वर्ग
शरीर मा आवश्यक छ के को लागि भिटामिन बी? भिटामिन बी 1, बी 2, बी 3, B5, B6, B9 किन शरीर आवश्यक छ?
Yum: फ्रान्स आनन्द सकिन्छ कि 27 भव्य मिठाईहरू
महिला मा gonorrhea को उपचार
बैंकिङ घरहरू। "बैंकिंग हाउस", सेन्ट पीटर्सबर्ग। CJSC "बैंकिंग हाउस"
छुट्टी तालिकाको लागि सुन्दर पकवान: पनीर वा चिकन संग भरी टमाटर
टिभी प्रस्तोता Artem Korolev: ब्याज संग जीवन
बाल लागि कोका को मास्क: "मीठो" प्रत्येक चुल्ठो लागि जीवन